टीएमएसबाट कसरी गर्ने सेयर कारोबार ? कति लाग्छ सेवा शुल्क ? - || वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक ||
२०७८ बैशाख २, बिहीबार १३:२०:००
पछिल्लो समय सेयर बजारमा कारोबार गर्ने लगानीकर्ताका संख्या हरेक दिन बढीरहेको छ । अझ सेयर कारोबार अनलाइनमार्फत् नै गर्न मिल्ने भएपछि लगानीकर्ताहरु यसतर्फ आकर्षित भएको देखिन्छ । नेपालमा सेयरको कारोबार शुरु हुँदा बैंकमा गएर सेयर खरिदका लागि आवेदन दिनु पर्ने अवस्था थियो । त्यसपछि ब्रोकर कार्यालयमा गएर चिच्चाएर अर्डर दिनुपर्ने अवस्था थियो ।
समय क्रमसँगै सेयर कारोबार अनलाइनबाट पनि सम्भव भएको छ । जसलाई हामी टीएमएस भन्छौं । नेप्सेका अनुसार अहिले औसतमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार अनलाइनबाट मात्रै हुन थालेको छ । नेप्सेका अनुसार टीएमएस लिनेको संख्या करिब ३ लाख ५० हजार पुगेको छ । तथ्यांक हेर्दा हालसम्म २८ लाख ८३ हजारभन्दा बढीले डिम्याट अकाउन्ट खोलेका छन् । त्यसैगरी मेरो सेयर खोल्नेहरुको संख्या पनि १५ लाखभन्दा बढी छ ।
अझ सानो लगानीबाट पनि सेयर कारोबार गर्न सकिने भएकाले मानिसहरुले आफूले बचत गरेर राखेको पैसा सेयरमा लगानी गर्न थालेको देखिन्छ । अन्य कुनै व्यवसाय शुरु गर्नका लागि १/२ लाख रुपैयाँले पुग्दैन । तर सेयरमा लगानी गर्नका लागि २० हजारबाट मात्रै शुरु गर्छु भन्न पनि सकिन्छ वा त्योभन्दा कम पैसाबाट लगानी शुरु गर्न सकिन्छ ।
टीएमएसको पूरा रुप हो, ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम । यो अनलाइनबाट सेयर कारोबार गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ । परम्परागत रुपमा ब्रोकर कार्यालयमा गएर मौखिक वा लिखितरुपमा सेयर खरिद वा बिक्रीको आदेश दिएपछि मात्रै सेयर कारोबार हुन्थ्यो । तर टीएमएस आइसकेपछि यो सेवा लिएका लगानीकर्ताले ब्रोकर कार्यालय धाउनु पर्ने बाध्यता छैन ।
लगानीकर्ताले घर, कार्यालय वा आफू बसेकै ठाउँबाट कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइललगायतका डिभाइसमा लगइन गरी सेयर कारोबार गर्न सक्छन् । यसका लागि सबैभन्दा पहिले तपाईंले कुनै ब्रोकर कार्यालयमा गएर टीएमएस सेवा लिनुपर्ने हुन्छ । यो लिए वापत कुनै शुल्क लाग्दैन । ब्रोकर कार्यालयमा केवाई (नो युअर कस्टमर) फारम अपडेट गराएपछि टीएमएसका लागि फारम भर्नुपर्ने हुन्छ । ब्रोकर कार्यालय अनुसार सोही दिन वा भोलिपल्टसम्म तपाईंको इमेलमा टीएमएसको युजर नेम र पासवर्ड आउँछ ।
यसरी युजर नेम र पासवर्ड आइसकेपछि तपाईंसँग भएको सेयर बिक्री गर्नका लागि कुनै समस्या छैन । तपाईंले विदाको दिन बाहेक आइतबारदेखि बिहीबारसम्म बिहान ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसबाहेक ती दिनमा विहान १०ः३० बजेदेखि १०ः४५ बजेसम्मको १५ मिनेटको समयमा प्रि–ओपन सेसनमा पनि कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ । टीएमएसबाट सेयर बिक्री गर्नका लागि तपाईंले अर्डरमा क्लिक गरेर सेल भन्ने अप्सनमा गइसकेपछि कम्पनीको नाम, बिक्री गर्न चाहेको सेयरको मात्रा र मूल्य लेखेर बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ । यसरी बिक्री भए वा नभएको तत्कालै देख्न सकिन्छ ।
यसरी सेयर मूल्य राख्दा तत्कालको मूल्यभन्दा अधिकतम र न्यूनतम २ प्रतिशतसम्ममा राख्न सकिन्छ । त्यसैगरी टीएमएसबाट कुनै कम्पनीको सेयर खरिद गर्दा पनि बाइ अर्डरमा गएर कम्पनीको नाम, खरिद गर्न चाहेको कित्ता र मूल्य राखेर समिट गर्न सकिन्छ । तर यसका लागि तपाईंसँग खरिद गर्न लागेको कुल रकमको २५ प्रतिशत रकम टीएमएसमा धितोका रुपमा राख्नुपर्ने हुन्छ । तपाईंले ब्रोकर कार्यालयमार्फत् कनेक्ट आइपीएसमार्फत् टीएमएसको कोल्याट्रल राख्न सक्नुहुन्छ ।
कोल्याट्रलमा जति रकम देखिन्छ त्यसलाई २५ प्रतिशत रकम मान्न सकिन्छ । जस्तै तपाईंको कोल्याट्रलमा २५ हजार रुपैयाँ छ भने तपाईंले १ लाख रुपैयाँसम्मको सेयर खरिद गर्न पाउनु हुन्छ । तपाईंले अर्डर र सेयर खरिद गरेसँगै धितोका रुपमा राखिएका कति रकम खर्च भयो भन्ने देखिन्छ ।
सेयर कारोबार भनेको खरिद वा बिक्री गर्नु हो । तपाईंले कुनै सेयर खरिद वा बिक्री गर्दा लाग्ने खर्च कतिको कारोबार हो भन्नेले अर्थ राख्छ । अर्थात् तपाईंले ५० हजार रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्नु भएको छ भने ०.४ प्रतिशत शुल्क बुझाउनु पर्छ भने ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म ०.३७ प्रतिशत ५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.३४ प्रतिशत शुल्क, २० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म ०.३० प्रतिशत शुल्क १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारमा ०.२७ प्रतिशत शुल्क लाग्छ । सेयर बिक्री गर्दा फाइदा भएको पैसामा मात्रै ५ प्रतिशत कर लाग्छ भने डिपी शुल्क भनेर प्रतिकारोबार २५ रुपैयाँ लाग्छ । त्यसबाहेक धितोपत्र बोर्डले पनि ०.०१५ प्रतिशत कमिसन लिन्छ ।
चीनको अनियन्त्रित रकेट पृथ्वीतर्फ आउँदै, कुन कुन शहर परे खतर...
प्रधानमन्त्रीले गरे 'नागरिक एप'को शुभारम्भ
२०७८ बैशाख १५, बुधबार
रोचकः अनलाइनमा खरिद गरे स्याउ, डेलिभरिमा आयो आइफोन
टेलिकमका पोस्टपेड प्रयोगकर्ताले रिचार्ज र बिलिङबारे बुझ्दा र...
सुविधा प्रयोग गरेर विद्युत् महसुल नतिर्ने उद्योगीहरुलाई एक म...